TOP NEWS: C/rashiid xidig oo guddoomiye looga dhigay madashii ugu horeysay ee mucaarad ku ah dowladda farmaajo | Kismaayo24 News Agency
Monday May 15, 2017 - 6:55 under Somali News by Tifaftiraha K24
Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Somalia ayaa shirar kala duwan ku qaadanaya magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, waxaana abuurmay isbaheysi sii xoogeysanaya oo ka dhan ah dowladda madaxweyne Farmaajo.
Xildhibaanadaani oo aad u farabadan ayaa la soo warinayaa in magaalada Nairobi ay ka dhiseen madal ay ku mideysan yihiin 105 Xildhibaan oo ka kala tirsan labada Gole ee dalka.
Madashaani cusub ayaa waxaa qeyb ka ah Xildhibaano lasoo shaqeynaayay dowladii uu Hogaaminaayay Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana iminka Madashan Guddoomiye loogu doortay Xildhibaan C/rashiid Maxamed Xidig.
Madashaani oo lagu magacaabo Horusocod ayaa noqoneysa tii ugu horeysay oo lagu cadaadin doono Xukuumada uu hogaaminaayo Ra’isul wasaare Xasan Kheyre, madaxweynahana uu ka yahay Farmaajo.
Madasha ayaa waxaa sidoo kale ku jira Xildhibaano ay ballanka uga baxeen Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’isul wasaare Kheyre, iyadoo aasaaska Madashaani ay kaalin mug leh ka qaadanayaan Guddoomiyayaal ka kala tirsan labada Gole.
Xildhibaanadaan ayaa waxaa kamid ah xildhibaanadii codka siiyey Ra’isulwasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid, sidoo kalana waxaa arrintaan wax ka og wasiiro hore oo ka tirsan dowladdii Xasan Shiikh Maxamuud.
Guddoomiyaha Madasha C/rashiid Xiddig ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay dhisi doonaan Guddiyo kale oo ka hoos shaqeyn doona Madasha.
Xidig ayaa loo arkaa inuu yahay nin galaangal iyo saameyn ku leh Baarlamaanka gudihiisa, isagoo ahaa ninkii Jawaari kula tartamay xilka Guddoonka Baarlamaanka doorashadii bishii Janaayo, inkastoo wareega horeba looga guuleystay.
Waxa uu Xiddig sheegay in Madashan ay noqon doonto mid ka duwan kuwii hore, isla markaana ay soo bandhigi doonaan dhammaan khaladaadka ay ku taagan tahay dowlada Madaxweyne Farmaajo.
Sidoo kale, qorshaha ugu weyn ee Madashan ayaa ah inay u xuubsiibtaan xisbi mucaarada ah oo noqon doona kuwo aqlabiyad ku leh Golaha shacabka.
Ma jiro hadal kasoo baxay Madaxtooyada Somalia oo ku aadan ku dhawaaqida Madashani cusub ee lagu carqaladeynaayo Siyaasada cusub ee Somalia.